WINE 6.14 inosvika neMono 6.3.0 uye 260 shanduko yakazara | Linux Vakapindwa muropa
WINE 6.14 inosvika neMono 6.3.0 uye 260 shanduko yakazara
Iyo yapfuura vhezheni yeWINE Staging llegó Pazuva risina kujairika, neChipiri, uye, nekufamba kwenguva kwevagadziri varo, chero munhu aigona kushamisika kuti chii chakaitika. Mhinduro yacho yaive yakapusa: izhizha uye isu tese tinomira kwechinguva. Mushure meiyo mini-kunonoka, WineHQ akakanda maawa mashoma apfuura WAINI 6.14, inova itsva yeStage vhezheni yakanaka kune avo vanoda nhau dzese nekukurumidza, asi haisi vhezheni yakasimba.
WineHQ inoti vakagadzirisa makumi matatu emabhugi, uye vaunza shanduko makumi matatu nenomwe. Pane runyorwa rweakakosha pane imwe inomira pamusoro pevamwe vese: iyo Mono injini, iyo inoita kuti zvishandiso zvienderane neMicrosoft .NET Sisitimu, yakagadziridzwa kuita vhezheni 6.3.0.
WINE 6.14 Staging dzakakwirira
Mono injini yakagadziridzwa kuita vhezheni 6.3.0, iine kumusoro kwenyowani.
32-> 64 zvishoma thunks zvakaitwa muWOW64 dll.
Vashandisi vanofarira izvozvi vanogona kuisa WINE 6.14 Staging kubva kune yayo kodhi kodhi, inowanikwa mukati izvi y iyi imwe link, kana kubva pamabhinari anogona kutorwa pasi kubva ku pano. Mune iyi link kubva kwatinga dhawunirodha mabhinari pane zvakare ruzivo rwekuwedzera iro repamutemo reprojekiti yekugamuchira iyi uye nezvimwe zvenguva pfupi zvigadziriso pavanongogadzirira masystem senge Ubuntu / Debian kana Fedora, asi kune mamwe mavhezheni e Android uye macOS. Iyo purojekiti inotibvumidza isu kusarudza bazi pakati peyakagadzikana, kusimudzira kana Dev uye Staging. Kana isu tichida kutora shanduko yazvino shanduko, isu tinofanirwa kusarudza Staging, asi tichifunga kuti haisi yakagadzikana vhezheni.
Iyo inotevera Staging vhezheni ichave WINE 6.15, uye ichasvika Chishanu chinotevera, Nyamavhuvhu 13. Tichifunga nezvekuti tiri muzhizha uye kuti vhiki ino vanga vari pakati pe mazana maviri nemazana matatu shanduko, ingangove imwe vhezheni isingazotyora zvinyorwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » WINE 6.14 inosvika neMono 6.3.0 uye 260 shanduko yakazara
Kuronga mhinduro. Zvirongwa muLinux 4
Mozilla Common Voice 7.0 inosvika neanopfuura maawa zviuru gumi nematatu ezwi rezwi